I-Forest House eduze kweNtaba(izivakashi ezi-2-6)-Mulshi - I-Airbnb
I-Forest House eduze kweNtaba(izivakashi ezi-2-6)-Mulshi
I-indlu yeholidi ephelele ibungazwe ngu-Mahesh
Indlu ene-rustic decor ilungele umndeni ofuna ukuphumula emathangeni emvelo.
1. Utshani obukhulu obuzungeze i-bungalow.
2. Izihlahla Zemvelo kanye Nezitshaliwe ezikunikeza isikhala esikhulu esinomthunzi ongaphandle ukuze udlale imidlalo noma ngisho nokuzipholela ku-hammock ulalele imisindo enokuthula yezinyoni zasehlathini.
3. Umndeni osebenza endlini uhlala eduze ne-bungalow. Ibhulakufesi neTiye Eliphezulu kufakiwe kuleli phakheji.
4. Ihlathi elikhulu elingemuva kwendlu kanye ne-Jungle Trek.
5.Impophoma endaweni (iMonsoon kuphela).
I-Forest House ine-1 AC Living Room ene-TV, Ikhishi eli-1, Igumbi lokugeza eli-1 kanye neGumbi Lombhede we-AC.
Abantu abangu-2 bathola indawo phezu kombhede e-ac bedroom, izivakashi ezengeziwe ezingafika kwabangu-4 zingathola indawo kumatilasi egumbini lokuhlala le-ac.
Amanzi Okuphuza E-Natural Spring aphuma emthonjeni wethu angajatshulelwa noma anganikezwa amanzi okuphuza apakishwe.
- Izivakashi zingasebenzisa ikhishi lethu elihlanzekile endlini ukupheka ukudla kwazo (Ukudla Okuhlanzekile Kwemifino Kuphela Sicela). Abanakekeli bethu bahlale bekulungele ukusiza.
- Ukudla kwasekuseni kanye Netiye Eliphezulu kufakiwe ephaketheni lakho lokubhuka futhi kuzohlinzekwa ngumnakekeli wethu.
- Singakwazi futhi ukuhlela ukudla (ngezindleko ezengeziwe) endaweni yokudlela eseduze.
- Izimpahla zetiye/zekhofi kanye namabhisikidi ziyatholakala ekhishini futhi abasizi bethu bangakwenzela lezi ziphuzo.
Sinezinhlobonhlobo zezihlahla zemvelo kanye nezitshalwe eduze kotshani bethu obukhulu obunakekelwe.
Ungakwazi futhi ukubhuka indawo yethu ukuze uthole imicimbi futhi nihlangane endaweni yotshani. Sinenqwaba yezihlalo namatafula angahlelwa ngaphansi komthunzi engadini yethu noma ehlathini! Futhi singamisa amatende ngomatilasi eduze kwendlu ukuze uthole izihambeli zakho ezengeziwe ngezindleko ezengeziwe.
I-Pre-monsoon - Inqwaba yezikhanyikhanyi ikhanyisa lonke ihlathi elingemuva kwendlu yethu yasehlathini.
I-Monsoon - Impophoma yemvelo ikhona endaweni yethu engajatshulelwa ngesikhathi sohambo olufushane lwasehlathini.
Le mpophoma igeleza phansi yenze umfudlana odlula eduze kwe-bungalow yethu. Izivakashi zingacwilisa izinyawo zazo emanzini ahlanzekile ngenkathi zihlezi ezitebhisini ze-bungalow yethu. Sithembe, umuzwa wayo omangalisayo!
Itholakala eduze kwentaba enehlathi nxazonke!
Umnakekeli uzohlala eduze kwendlu ukuze abingelele futhi akusize noma nini.